Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Naato ny asany! Serivisy fiaramanidina Fastjet any Tanzania
Nilaza ny tompon'andraikitra amin'ny kaompaniam-piaramanidina Fastjet tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo fa hofoanana ny sidina hatramin'ny faran'ny volana janoary.
Ny manampahefana fiaramanidina tanzaniana dia nanala vonjimaika ny fahazoan-dàlana FastJet hatramin'ny faran'ny volana janoary taona lasa teo, nitanisa ny fanafoanana ny diany sy ny fanangonam-bola be nananan'ny kaompaniam-pitantananana ireo mpiantoka azy sy ny governemanta Tanzania.
Ny manampahefana misidina ao amin'ny foibem-pivarotana tanzania ao Dar es Salaam dia nilaza fa tamin'ny alatsinainy lasa teo fa tsy nahomby tamin'ny famahana ny olana momba ny asa ny FastJet izay nanjary fikorontanana mafy tamin'ny sidina.
Nilaza ny tompon'andraikitra amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo fa hofoanana ny sidina hatramin'ny faran'ny volana janoary.
Nilaza ny Fahefana Aviation Civile Tanzania (TCAA) tamin'ny Alatsinainy fa very ny fahazoan-dàlana hiasa ao Tanzania ny Fastjet Tanzania noho ny fanafoanana matetika ny sidina matetika isan'andro.
Nanampy ihany koa ny manampahefana fa ny kaontenera afrikanina teti-bola dia manana trosa be amin'ny mpanome tolotra, anisan'izany ny TCAA. Nambarany fa tokony ho 600,000 dolara amerikana (Tshs 1.4 miliara) ho an'ny governemanta Tanzania i Fastjet tamin'ny alàlan'ny fanomezana serivisy ao anatin'izany ny fiarovana sy ny saram-pitsaboana hafa.
Ny tale jeneralin'ny TCAA Hamza Johari dia niantso ireo mpanome tolotra rehetra tratran'ny FatstJet handefa ny faktiorany any amin'ny manam-pahefana misahana ny fiaramanidina sivily mba handray andraikitra.
Ny manam-pahefana dia namoaka fanamarihana 28 andro ho an'ny zotram-piaramanidina handefa ny drafitra ara-bola sy ara-barotra nataony taorian'ny nandraisan'ny mpampiasa vola tanzanianina vola ny orinasa.
Nilaza i Johari fa ny FastJet dia tsy nanana fiaramanidina ampy ho an'ny sidina, toe-javatra iray izay nahatonga azy ireo tsy hanana mari-pahaizana hanao asa eto amin'ity firenena afrikanina ity. "Miantso ny olona izahay mba hitady seranam-piaramanidina hafa satria tsy afaka miasa i Fastjet," hoy izy.
Fastjet dia nandefa fampandrenesana tamin'ny herinandro lasa teo nilaza fa nofoanana ny dia rehetra kasaina hatao amin'ny volana desambra sy janoary 2019 noho ny olana eo amin'ny sehatry ny asa izay tsy nohazavainy ka nanery ny mpanjifa izay efa namandrika tapakila hitady kaompaniam-pitaterana an'habakabaka hafa.
Voalaza fa nampiato ny sidina anatiny sy ivelany ny zotram-pitaterana an'habakabaka, ary avy eo dia nanery mpandeha mihoatra ny 100 handany alina tao an-tanàna.
“Nampiato anay tamin'ny alàlan'ny Fastjet ny dia rehetra tany ivelany nanomboka tamin'ny fiandohan'ity volana ity tamin'ity taona ity taorian'ny nahatsapantsika fa miatrika krizy ara-bola ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka. Ny orinasa dia hanohy ny dia any ivelany rehefa afa-po tanteraka izahay fa manana ny fahafaha-miasa, "hoy i Johari.
FastJet dia nandefa ny sidina mpandeha nomaniny ho azy tamin'ny taona 2012 tao anatin'ny toe-javatra sarotra tany Tanzania. Izy io dia mampandeha ny sidina isam-paritany avy any Dar es Salaam mankany Lusaka any Zambia, Harare (Zimbabwe), Maputo (Mozambika), ary Johannesburg any Afrika Atsimo.
Ny sidina rehetra mankany sy avy any Afrika atsimo, Zimbabwe, ary Mozambika dia tsy voakasiky ny krizy an'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka.
Tanzania dia eo amin'ny firenena afrikana manan-karena amin'ny fizahan-tany, fa ny fijaliana amin'ny fitaterana an'habakabaka mandritra ny efa-polo taona taorian'ny nianjeran'ny East African Airways (EAA), tao anatin'ny 40 taona lasa, dia natsangana ny orinasan'ny Air Tanzania Company (ATCL) izay manidina amin'ny hafainganam-pandeha hatramin'ny voalohany.
Ny PrecisionAir ihany, ilay kaompaniam-pitaterana an-tsokajiny tompony manokana, no tafavoaka velona tamin'ny lanitra feno korontana amin'ity firenena afrikanina ity nandritra ny roapolo taona mahery.
PrecisionAir dia manidina amin'ny ankamaroan'ny toerana itodiana any Tanzania isan'izany ny tanànan'ny mpizahatany Arusha, Moshi eo amoron'ny tendrombohitra Kilimanjaro, ny nosy fizahan'i Zanzibar, ary ny tanànan'i Mwanza an'ny Lake Victoria. Mampifandray ny tanàna fizahan-tany sy tanànan'ny orinasam-pandraharahana any renivohitra Kenyan an'i Nairobi, ivon-toeran'ny safari afrika atsinanana ihany koa ny zotram-piaramanidina.
Ny fampiatoana ny sidina anatiny an'ny FastJet any Tanzania dia mbola fahatafintohinana iray hafa ho an'ireo mpandeha satria mihabe ny fitakiana seza fitaterana an-habakabaka.